Indoda yaseTaurus - Itaurus
Ulwazi malunga neTaurus Man x
Ngenxa yokuba uphawu lweTaurus luhlala lungenalo inyathelo, amadoda eTaurus anokufumana lula ukuhlaselwa kukothuka xa ilixesha lokoyisa umxholo womnqweno wabo. Kukho ukungqubana phakathi kwezithethe zabo zemveli kunye nendalo yabo ethambileyo. Nayiphi na imeko apho bangaqinisekanga malunga novavanyo lwabo lweemvakalelo zomntu kukuthambeka okumtyibilizi ngokweemvakalelo. Xa besenza isigqibo sokuthabatha inyathelo lokuqala, oku ngokuqhelekileyo kuya kuba yimveliso yohlalutyo olude lwendlela omnye umntu awayesenza ngayo, nangona besenokungayiqondi loo nto. Ukuba umntu weTaurus ukhuselekile malunga nendlela aziva ngayo kwaye uyayiqonda iimvakalelo zeqabane lakhe, uya kuba ngumthandi othobekileyo onyamekela lowo umthandayo ixesha elide kakhulu.
Le ndoda ayiqulunqi kakhulu xa kuziwa kwisondo. Akayiyo indoda yakho eqhelekileyo, nangona esenokubonakala ngathi yenye ngenxa yeembono zakhe zesiNtu. Ngelixa ethambileyo kwaye elazi iqabane lakhe, ungumntu onomdla, isithandwa senyama, othanda i-foreplay njengoko ethanda ukuncanyiswa kunye nokuphululwa. Uyakuqonda ukubaluleka kweemvakalelo kwisini kwaye unokuba ngomnye wabathandi ababalaseleyo kwi-zodiac, kodwa kuphela xa ephumla kwaye ebeka amandla athile kubuchule bokuphucula ubomi bakhe bezesondo. Ngenkuthazo efanelekileyo, kufuneka afumane kwaye abelane ngolonwabo lokwenyani lwesondo kunye neqabane elifanelekileyo
Kunyanzelekile ukuba indoda yaseTaurus ihambe. Unesidingo esingaqhelekanga sokulala imini yonke kwaye atye oko omnye umntu amlungiselele kona, enotyekelo olunamandla lokuba ngunyana omoshiweyo weqabane lakhe endaweni yesithandwa. Lo ayisiwo umthetho, kodwa kukho isigaba kubomi beTaurus xa bengafuni ukwenza nto. Eyona nto ibalulekileyo kubo kukuphuma endlwini yonke imihla. Oku kulula xa ubudlelwane butsha, kuba kuya kumnika amandla okwaneleyo kunye nenkuthazo ukuba abe nobuchule kunye nomdla, njengoko kufuneka kube njalo uVenus. Nangona kunjalo, xa indoda yaseTaurus iqala ukuhlala nomntu, kufuneka ihlale ihamba. Ukuba akunjalo, unokuma ngokuqinileyo kangangokuba naye angadikwa nguye.
Ngaba unokumthemba wakhoTaurus indoda
Amaxesha amaninzi, akayi kuthetha ilizwi. Ukuba uyakwenza oko, ngokuqinisekileyo iya kuba yinto engaphaya kwengqondo okanye imbono ngendlela engabonakalisi iimvakalelo zokwenene. Nangona ebonakala eneemvakalelo ngokucacileyo, unengxaki yokwenene yokuyibonisa. Umnqweno wakhe wesini olandela imvakalelo yinto emoyikisayo, kuba engayazi indlela yokudibanisa ezi zimbini. Akulula ukuba aphumle ngokwaneleyo ukuze avuleke kwaye abelane ngelizwe lakhe leemvakalelo kunye nesondo kunye nawe. Oku kunokukhokelela ekungathembani ngumlingane wakhe, kuba akukho ngcaciso yokwenene kwi-Inner Self yakhe. Xa ephalaza imbilini yakhe komnye umntu, umnika isipho esimthemba ngokupheleleyo esifanele sixatyiswe. Kulapho uyazi ukuba soze akuphoxe.
Ukuba akakuhambisi kwindawo yokutyela efanayo ngalo lonke ixesha, ukuthandana naye kunokuba mhle kakhulu. Unomdla wokuthandana kwaye xa eziva enomtsalane, uya kwenza nantoni na ukuze azuze intliziyo yomntu amthandayo. Icala elimangalisayo lokuthandana nendoda yeTaurus yimeko ekhululekile ngaphandle koxinzelelo konke konke. Unokuhlala ekhaya aze akuhleke ngelixa esitya i-whip cream egxalabeni lakho, okanye akuse ukubukela ukutshona kwelanga kwelinye ilizwe. Bekuya kuba yinto efanayo kuye kuba akaziva ecinezelekile ukuba enze nayiphi na kwezi zinto kwaye unamandla okuzenza ngokuzenzekelayo. Nangona kunjalo, ungalindeli ukuba axhume kwi-bungee - ayisosimbo sakhe esi.
Uyindoda entsonkothileyo enecala elinamandla ngokweemvakalelo ekufuneka ifakwe kwihlabathi lobudoda elimngqongileyo. Ngokufuthi unokuziva engafaneleki ngenxa yolu thantamiso alwaziyo, kwaye ngamanye amaxesha uzama ngamandla ukukhupha icala lakhe elithambileyo nangona luluphawu lwakhe olukhulu. Xa ebuhlungu, uya kuzifihla iimvakalelo zakhe kwihlabathi kwaye mhlawumbi nakubantu abasondeleyo kuye. Udinga ububele obuninzi kunye nomonde ukuze abe yindoda efezekileyo yomntu.
Indoda yaseTaurusUkuthandwa nokungathandwa
Indoda yeTaurus inesisa, ithenda kwaye izinikele, kodwa ngamanye amaxesha inokuba lukhuni kwaye ingashukumi. Ukuba uyabazi ubuthathaka bakhe, unokubhenela kwimidlalo okanye kulo naluphi na uhlobo lomthambo ukuze azive enesiseko kwaye ekulungele ukwenza okuthile. Ukuba uwela kwimeko yakhe engasebenziyo, kukho ithuba elikhulu lokuba uya kuba nesithukuthezi kuye, ayeke iqabane lakhe.
Indlela yokukhetha isipho sakhoIndoda yaseTaurus
Ukuba ufuna isisombululo esilula, mthengele into ephathekayo efana nehempe yomqhaphu okanye ibhulukhwe. Kwakhona, uphawu lwe Taurus idibaniswe nokutya kunye nengqiqo yokunambitha, abaninzi abameli beTaurus bathanda ukuchitha ixesha elithile ekhitshini. Yiyo loo nto naziphi na izinto zasekhitshini ezinomdla zinokulingana kakuhle ukuba sele efumanise ukuba uthanda kangakanani ukupheka. Ukuba ufuna ngokwenene ukwenza indoda yakho yeTaurus yonwabe, faka ifaskoti enomtsalane, ulungiselele isidlo sothando kwaye ubhake ikhekhe letshokholethi enegama lakhe elibhalwe ngoonobumba abanemibala.
Iponti Virgo Capricorn Iiary Isagittarius